Shiinaha Jet Micron Fasalka Kala-sooca warshadaha iyo soosaarayaasha | Qiangdi
Ardayga fasalka marawaxadaha, oo ah arday fasal kufilan ah bartamaha soo galida hawada iyo wareegga qiimaynta jiifka ah wuxuu ka kooban yahay rotator darajo, hagaajinta muraayadaha hagaha iyo shey wareerka.
Ardayga fasalka marawaxadaha, oo ah arday fasal kufilan ah bartamaha soo galida hawada iyo wareegga qiimaynta jiifka ah wuxuu ka kooban yahay rotator darajo, hagaajinta muraayadaha hagaha iyo shey wareerka. Agabkan waxaa lagu quudiyaa kaydadka kore, mirahana waa la sifeyn doonaa oo si wanaagsan ayaa loo qaybin doonaa hawada soo socota, taas oo keeneysa hadhuudhka aagga qiimaynta. Awoodda bartamaha ee ay soo saarto wareegga degdegga ah ee wareegga qiimeynta oo ay weheliso xoogga salka ku haya soosaarida sambabada pneumatic-ka waxay labaduba ku dhaqmaan miraha dhibcaha. Markay xoogga santuuqa ee hadhuudhku ka weynaado awoodda tiirarka dhexe, miraha qallalan ee ka sarreeya heerka darajo bixinta ayaa hoos loogu wareejin doonaa darbiga weelka. Hawada sare waxaa lagu hagaajin doonaa duufaan isku mid ah iyada oo loo marayo hagaha hagaha iyo kala soocida miraha khafiifka ah ee ka soo baxa coarserones. Midhaha kaladuwan ee kala go'ay ayaa laga afuufi doonaa dekedda laga sii daayo. Midhaha khafiifka ah waxay u imaan doonaan kala-soocayaasha duufaanka iyo aruuriyaha, halka hawada la sifeeyay la geyn doono meel ka baxsan qabyada.
1 .Waxay la jaan qaadi karaan noocyo kala duwan oo ah noocyo qallalan oo ah mashiinada wax lagu shiido (jet mill, ball mill, Raymond mill) si loo sameeyo wareeg wareeg ah.
2. Waxaa lagu dabaqay kala saarida ganaaxa ee alaabada heerka micron-qalalan sida kubbadda, flake, irbadaha iyo walxaha cufnaanta kaladuwan.
3. Qalabkii ugu dambeeyay ee loo yaqaan 'rotor classification design' ayaa la isticmaalay, taas oo ah horumar weyn oo lagu sameeyay kala soocida cabbirka walxaha marka la barbar dhigo badeecada jiilkii hore, iyadoo laga helayo faa iidooyin sida darajo sax ah oo sarreysa iyo cabbirka walxaha la isku hagaajin karo iyo noocyo aad u habboon oo beddelka ah Qalabka marawaxadaha qiimeynta taagan oo leh xawaare wareegsan oo hooseeya, iska caabbinta xirashada iyo awoodda nidaamka hooseeya.
4. nidaamka xakamaynta waa otomaatig ah, xaaladda socda waxaa lagu soo bandhigaa waqtiga dhabta ah, hawlgalku waa mid aad u fudud.
5. Nidaamku wuxuu ku socdaa cadaadis taban, qiiqa wasakhda ayaa ka yar 40mg / m, sanqadha qalabka kama badna 60db (A) adoo qaadanaya cabirka qiiqa.
Naqshadee socodka socodka kala duwan iyadoo loo eegayo maadada iyo awooda
Muunado Codsi Qayb ah
Hore: Nidaamka Gawaarida Gawaarida ee Jet-ka ee Qalabka Gaarka ah
Xiga: Qeybaha Jet Mil